ဘဏ်လုပ်ငန်း - စပိန်မှာဘာလဲ၊ ဘာအမျိုးအစားလဲ စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
ယနေ့လူတိုင်းတွင်ဘဏ်စာရင်းရှိကြသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အကောင့်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သင်လိုအပ်သမျှအတွက်သင်၏ငွေများဆက်လက်ရှိနေရန်အတွက်တာ ၀ န်ရှိသောဘဏ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘဏ်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
သို့သျောလညျး ဘဏ်အကြောင်းနောက်ထပ်ဘာသိထားလဲ? ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုသင်သိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပေးနိုင်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံး? ဒါကအများကြီးအများကြီးကျနော်တို့လာမယ့်အကြောင်းပြောမယ့်အရာဖြစ်တယ်။
5 စပိန်တွင် operating နိုင်ငံခြားဘဏ်ဘဏ်လုပ်ငန်း
ဘဏ်တစ်ခုသည်ခရက်ဒစ်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်သိုလှောင်ရုံကဲ့သို့သောအခြားအမည်များရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း၎င်း၏ဘုံအမည်၊ ဘဏ်အားဖြင့်လူသိများသည်။ အဲဒါက ဖောက်သည်များအတွက်ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်သောဘဏ္ာရေးကုမ္ပဏီ, ဥပမာ - ချေးငွေ၊ ခရက်ဒစ် ... ဖောက်သည်များမှငွေအပ်နှံထားသည့်ငွေကိုဂရုစိုက်ခြင်း။
တာဝန်ဝတ္တရားစစ်ဆင်ရေး။ လူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှငွေများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်
ပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းများ ထို့အပြင်သူတို့သည်ငွေပေးငွေယူများကိုတတိယပါတီများသို့ငွေချေးရန်တာဝန်ရှိသည်၊ ၎င်းငွေပေးချေမှုအတွက်အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်နှင့် ၄ င်းတို့၏စွန့်စားရမှုအတွက်အမြတ်အစွန်းပိုမိုရရန်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဏ်တစ်ခု၏တာ ၀ န်ယူမှုအနည်းငယ်ကိုသာဖျက်သိမ်းလိုက်လျှင်၎င်းသည်ဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤအမျိုးအစားသည်ဘဏ်စာရင်းများ၊ ငွေစုစာရင်းများ၊ ဘဏ်ကတ်များ၊
တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သူတို့ကဒီအကြောင်းတွေပြောနေတာပဲ ဘဏ်တွင်ငွေပမာဏအနည်းငယ်ချန်ထားခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းကိုသူတို့အလိုရှိတိုင်းထုတ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်တချိန်တည်းမှာပင်ဘဏ်သည်တတိယလူတစ် ဦး အားငွေထုတ်ချေးရန်လိုအပ်သည့်ငွေဖြစ်လွယ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် (ယင်းသည်တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည့်) ။
ကျနော်တို့မှတ်ချက်ချပြီးသားကြောင့်ရည်ညွှန်းသည် ပိုက်ဆံချေးငွေနှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အခြားသူများအားချေးငှားခြင်းနှင့်ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိခြင်းအားဖြင့်ငွေကိုရွှေ့ပြောင်းရန်ကြိုးစားသည်။
ဥပမာဒီလည်ပတ်မှုအမျိုးအစားများတွင်ချေးငွေနှင့်လိုင်းချေးငွေ၊ ချေးငွေ၊ ပေါင်နှံခြင်းများ ... သူတို့နှင့်အတူသူတို့လုပ်ပေးတာကသူတို့လိုချင်တဲ့သူကိုငွေအရင်းအနှီးလိုအပ်တဲ့သူကပေးတဲ့အတိုးနဲ့လဲလှယ်တယ်။ ဘဏ်ကိုယ်တိုင်ကဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုယူခြင်းအတွက်ရရှိသည်။
ယခုအခါဘဏ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာကြပါစို့။ သင်တို့သည်မယုံသော်လည်း၊ သင်သိသည့်အတိုင်းဘဏ်များသည်ဤအယူအဆအတွင်းသို့ကျရောက်သည်မဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့်၊ အောက်ပါတို့ကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည် -
ဤဘဏ်အမျိုးအစားမှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီးသင်သိသောဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်သင်၏လစာ၊ ပင်စင်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေသည်ဤကဲ့သို့သောဘဏ်စာရင်းတွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ဤရွေ့ကားဖောက်သည်ပုဂ္ဂလိကတစ် ဦး ချင်းစီရှိရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။
အထူးသဖြင့်, သူတို့ဖြစ်ကြသည် သင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်နိုင်၊ ချေးငွေသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်တောင်းခံနိုင်သောဘဏ်များ အလွတ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသော်လည်း (၎င်းတို့သည်အခြားဘဏ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်လေ့ရှိသော်လည်း) သူတို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သာလုပ်ကိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့၎င်းသည်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် ဘဏ်လုပ်ငန်းသည်ကုမ္ပဏီများကိုသာအာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းတို့တွင်လက်လီဘဏ်လုပ်ငန်းကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများရှိကောင်းရှိသော်လည်း၎င်းတို့တွင်လုပ်ခလစာ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်းမှုများ၊ အွန်လိုင်း POS စသည်တို့ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသေးသည်။
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းသည်လက်လီဘဏ်လုပ်ငန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ပို၍ တိကျသောအပိုင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသို့မဟုတ်ကံကြမ္မာကိုပိုင်ဆိုင်သူများ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်မှာ၎င်းတို့သည်သူတို့၏အချမ်းသာဆုံးသောဖောက်သည်များကိုအထူးကုသမှုပေးသောဘဏ်များဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ဂရုစိုက်သည်။
ဖောက်သည်များကိုသူတို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်တူညီနိုင်သော်လည်းအထူးသီးသန့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမြတ်အစွန်းများသည့်အမြတ်အစွန်းများရှိသည့်ကော်မရှင်များနည်းပါးသောအခြားကော်မတီများနည်းပါးခြင်းနှင့်အခြားသောအကျိုးအမြတ်များသည့်အခြားအမျိုးအစားများကိုပေးသည်။
ဒါ့အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘဏ်လုပ်ငန်းလို့လည်းလူသိများပါတယ် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်၏တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ် အထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ရယူခြင်း၊ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အခုသင်ဘာကိုဘဏ်သိတယ်၊ အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားများ၊ သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပိုသိလာပြီဆိုတော့သင့်အတွက်အချိန်ရောက်လာပြီ စပိန်တွင်တည်ရှိသောဘဏ်များနေသော။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၌ရှိသည့်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသင်သိရုံသာမကဘဲ၊ သင်ကြားနိုင်သောဘဏ်များစွာရှိသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်များစွာသောကြားရခြင်း၊ ကြီးမားခြင်း၊
Caixa Geral ဘဏ်
အဆိုပါ Caminos ဘဏ်
Banco de Caja de Españaကို Salamanca နှင့် Soria တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
Castilla- La Mancha ၏ဘဏ်
Custodian ဘဏ် BBVA
အဆိုပါ Finantia Sofinloc ဘဏ်
Mare Nostrum ဘဏ်
Banco Pichincha စပိန်
ဘဏ် ၄ ခုငှားရမ်းပါ
Santander Securities မှ ၀ န်ဆောင်မှုများ
စပိန်တွင် operating နိုင်ငံခြားဘဏ်ဘဏ်လုပ်ငန်း
ဤကိစ္စတွင် အကယ်၍ သင်သည်စပိန်ရှိမည်သည့်ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုမကြိုက်ပါကသို့မဟုတ်သင်ကမ္ဘာကိုလည်ပတ်နေသည့်စီးပွားရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်တစ်ခုထက်ပိုကောင်းမည်။ နိုင်ငံခြားသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်အတွက်အကောင့်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်သင့်တွင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည် - တစ်ဖက်တွင်စပိန်တွင်ရုံးများရှိပြီးနိုင်ငံတွင်လည်ပတ်နေသောသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအောက်တွင်သင့်အားပေးမည့်စာရင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သင့်တွင်ရုံးဖွင့်စရာမလိုဘဲလည်ပတ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ဘဏ်များရှိသော်လည်း၊
Banque Marocaine ကုန်သွယ်ရေးပြင်ပ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » ကမ်း » ဘဏ်လုပ်ငန်း